အရမ်းကိုထိနေတာပါပဲရှင် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on December 21, 2020 Author admin	Comments Off on အရမ်းကိုထိနေတာပါပဲရှင်
ကျမ အသက်က နှစ်ဆယ့်ကိုး နှစ်ပါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ စာရင်းကိုင်လုပ်ရင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ခန်းလေးတစ်ခန်းငှားနေတယ်ဆိုပါတော့ ။ အရင်က ကျမယောကျာ်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ ဖြစ် ခဲ့ဖူးပေမယ့်လူပျိုစစ်စစ်လေးတစ်ယောက်နဲ့တော့ဖြစ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေတော်တော့်ကို ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ကျမဆိုလိုတဲ့လူပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက မိန်းကလေးတွေနဲ့ လုံးဝ တစ်ခါမှ မထိတွေ့ ဖူးသေးတဲ့လူပျိုစစ်စစ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပါ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် မနမ်းဖူးသေးတဲ့လူပျိုလေးမျိုးပေါ့။တစ်နေ့  ကျမအန်တီတို့ အိမ်ကို အလည်သွား မိတဲ့နေ့ တစ်နေ့ ပေါ့ ။ ကျမရဲ့ အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ပေါ်လာမယ့်နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်လာတော့မယ့်နေ့ တစ်နေ့ ဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။အန်တီတို့ အိမ်မှာ အရင် တစ်ခါမှ မတွေ့ ဖူးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ ရတယ်လေ ။သူ့ နာမည်ကထွန်းထွန်း တဲ့ အန်တီတို့နဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်ဆိုပါတော့ ။
အသက်က ၁၉ နှစ် ပဲရှိသေးပြီးအန်တီတို့ အိမ်မှာနေပြီး ကျောင်းလာတက်တာ ။ အချိန်တိုင်း ကျမ သူနဲ့ နီးစပ်ဖို့ အကြံထုတ်ရပါတော့တယ် ။ ၁၉နှစ်သာပြောတာရှင့် ။ ထွားလိုက်တဲ့ကိုယ်လုံး။ မိန်းမတယောက်ကို ပျော့ခွေသွားအောင်လုပ်ပစ်နိုင်တဲ့အချိုးအစား ။ များသောအားဖြင့်သူတို့ အရွယ်ယောကျာ်းလေးတော်တော်များများက ပျော့တိပျော့ဖတ်ကလေးတွေလေ ။အလှပဲပြင်နေကြတာများတယ် ထွန်းထွန်း ကျတော့ အားကစားလိုက်စားလို့ ထင်ပါရဲ့လက်မောင်းအိုးတွေက လည်းထွားထွား ၊ ရင်အုပ်က ကျယ်ကျယ်နဲ့။ သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကတောင်သူ့ ရဲ့ တင်ပါးဆုံကြွက်သား အစိုင်အခဲတွေကို ဖုံးကွယ်မထားနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ ။ ရှေ့ ပိုင်းကနေကြည့်ရင်သူ့ ရဲ့ထွားကြိုင်းလှတဲ့ အချောင်းကြီးကို အမြှောင်းလိုက်ကို မြင်ရတာ ။ အသားက လတ်လတ် ၊ဆံပင်နက်နက် ၊ မျက်လုံးနက်နက်တွေနဲ့။ အို…ရင်ခုန်ချင်စရာပါပဲရှင်ရယ် ။
မရှက်တမ်း ၀န်ခံရရင်တော့ သူ့ ကို စ တွေ့ လိုက်ကတည်းက ကျမရဲ့စိတ်တွေဟာ မရိုးမရွဖြစ်လာမိတော့တာ ။ ပီးတော့ကျမသာသူနဲ့ ရွယ်တူဆိုရင် သူ့ ကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်မိပါတယ် ။တခါတရံ သူ့ ရဲ့ ဘောင်းဘီရှေ့ က အထင်းသားပေါ်နေတဲ့ အမြှောင်းရာကြီးကို ကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမနဲကြီး ထိန်းထားနေရတော့တယ် ။ သူနဲ့ လှေကားအတက်အဆင်းမှာ နှစ်ခါလောက်ဆုံဖြစ်တော့ သူ့ ကိုကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှအပတွေ မသိမသာလှစ်ဟပြလိုက်မိပါတယ် ။ ကျမရဲ့သုံးဆယ့်လေး လက်မ နီးနီးရှိတဲ့ရင်သားတွေကို ပိုပေါ်အောင်တီရှပ်ကို ကြပ်ကြပ်လေးဝတ်ပြီးအသားကပ်ဘောင်းဘီတင်းတင်းလေး ကို ၀တ်ပြီး သူ့ ကို သိသိသာသာကြီးမြူဆွယ်သလိုလုပ်မိရော ။ထမင်းစားပွဲမှာ အန်တီတို့ နဲ့ တူတူထိုင်ဖြစ်ကြတော့ သူ့ ကို ကျမရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပြီးအကူအညီလိုရင် ဆက်ဖို့ ပေးလိုက်မိပါတယ် ။ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဘာအကူအညီလိုလို တောင်းဖို့လည်းပြောရတာပေါ့ ။
ဟန်ပြအနေနဲ့ကျမကလည်း သူ့ မိဘတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြန်ယူထားလိုက်တာပေါ့ ။ သူရောက်ပြီး တစ်လလောက်အကြာမှာ ကျမအခန်းမှာ နေ့ လည်စာ လာစား ဆိုပြီး ထွန်းထွန်းကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေ အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလာရင်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသေချာပြောပြလိုက်တယ် ။ တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ၁၁နာရီခွဲလောက်မှာ ကိုယ်တော်ချောက ကျမအခန်းကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ချလာပါလေရော ။ ကျမက အခန်းသန့် ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတာ ။ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းကလည်း မနက် ၈နာရီလောက်ကတည်းက ထွက်သွားလိုက်တာခုထိပြန်မရောက်သေးဘူး ။ကျမလည်း အိမ်နေရင်းဆိုတော့ ည၀တ်အကျီ င်္လေးပဲဝတ်ထားမိတယ်ရှင့် ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး အောက်ခံလည်း ဘာမှ ၀တ်မထားမိဘူးလေ ။ အကျီ င်္ကပါးတယ်ဆိုပေမယ့် ကျမရဲ့နို့ တွေ ကိုအတိုင်းသားမြင်ရပေ မယ့်လည်း။
အောက်ပိုင်းကအမွှေးစုစုလေးကိုတော့ ကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိမျိုးနဲ့မှ မြင်ရလောက်မှာပါ ။ကျမလည်း ထွန်းထွန်းကို ဆိုဖာပေါ်မှာ အဆင်ပြေသလိုသာကြည့်ထိုင်ဖို့ပြောရင်းနေရာပေးလိုက်ပါတယ် ။အဲဒီနောက်“ထွန်းထွန်းရေ.. ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရေသန့်ဗူးရှိတယ် ။ အချိုရည် သောက်မလားဟင် ။ သောက်မယ်ဆို မမအတွက်ကော ၂ခွက်စာဖျော်ပေးပါလား ၊မမ လက်မအားလို့““ဟုတ်ကဲ့ မမ ” ထွန်းထွန်းဖျော်လာတဲ့အချိုရည်ခွက် ကိုလှမ်းယူရင်း သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေပြောနေတုန်း သူ ခန ခန ကျမရဲ့နို့ တွေကိုခိုးခိုးကြည့်နေတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ် ။ ဆယ့်ငါး မိနစ်လောက် စကားပြောကြပြီး ထွန်းထွန်း ကိုဒီနေ့ လည်စာ ဘာဟင်းနဲ့ စားချင်လဲဟင်လို့ မေးလိုက်တော့ ဟင့်အင်း ရတယ်မမ ဘာနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်စားတတ်ပါတယ်လို့ညင်သာစွာ သူကပြန်ဖြေတယ် ။
ကျမလည်း သူ့ ကို သက်သာသလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့ ပြောရင်း မီးဖိုချောင်ထဲကို နေ့ လည်စာချက်ဖို့ ဝင်လိုက်ပါတယ် ။“ထွန်းထွန်း..မမကို လုပ်ကူပါလား ” လို့ ကျမ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ သူလည်း မီးဖိုချောင်ကချက်ပြုတ်နေတဲ့ကျမနား ရောက်လာပါရော ။ စကားတွေ ဟိုပြောဒီပြော ပြောကြရင်း သူ့မှာ ရည်းစားရှိမရှိ အစ်ကြည့်တော့ တစ်ခါမှရည်းစားမထားဖူးဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရပါတော့တယ် ။ ကျမကလည်း ပြန်ပီးယောကျာ်းလေးတွေက ဒီလိုပဲညာပြောတတ်ကြတာပဲ လို့ ပြောတဲ့အခါ သူက “ မညာပါဘူးမမရယ်..ကျွန်တော် စိတ်ကိုမ၀င်စားလို့ ပါ ” တဲ့။ ကျမလည်း စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး ပျော်မိတာပေါ့ ။“မမ က ဒီမှာ တစ်ယောက်ထဲနေတာလားဟင် ”“မဟုတ်ဘူး မောင်လေးရဲ့မမသူငယ်ချင်းနဲ့ နေတာ ၊ သူက သူ့ ရုံးမှာဒီနေ့ အချိန်ပိုရှိလို့ ဆိုပီးမနက်စောစောကတည်းကထွက်သွားလို့မင်းမတွေ့ လိုက်တာ ”ဒီလိုပြောနေရင်း ကျမလည်း သူ့ ကို ကျောပေးလျက်အနေအထားကနေ သူ့ ဘောင်းဘီရဲဂွကြားထဲကိုမသိမသာ ခိုးကြည့်မိတယ် ။
ပီးတော့ကျမ ရဲ့ တင်သားတွေကို တမင်လှုပ်ရင်း သူ့ ရှေ့ ကနေထွက်လာမိပါတယ် ။ ဗိုက်ဆာနေပြီလား မေးတော့ ရပါတယ်မမ တဲ့ ။ ကျမလည်း“တီဗီကြည့်ချင်ကြည်လေမောင်လေး မမ အိပ်ခန်းထဲမှာ တီဗီက ၊ကိုယ့်အိမ်မှာနေသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေ ၊ စာအုပ်ဖတ်ချင်လည်းယူဖတ် ” လို့ ပြောရင်း သူ့ ကို ကျမအိပ်ခန်းထဲကတီဗီဖွင့်ပေးပြီး ချက်ပြုတ်နေတာလက်စသတ်ဖို့ မီးဖိုချောင်ဖက်ပြန်ဝင်လိုက်တယ် ။ ကျမ ချက်ပြုတ်ပြီးလို့အိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မဂ္ဂဇင်းနဲ့ ကိုယ်တောချောက ငြိမ်နေလိုက်တာ။ကျမလည်း သူ့ ဘောင်းဘီခွကြားကို မသိမသာအကဲခတ်ကြည့်တော့ ဖောင်းနေပီလေ ။ ကျမကိုရုတ်တရက်တွေ့ လိုက်ရင်ပဲ စာအုပ်ကို ဖွက်လိုက်ပြီး ရှက်သွားတဲ့မျက်နှာလေး နဲ့ ကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ် ။ တော်သေးလို့ ပေါ့ မနေ့ ညက….နဲ့ ကျမ ဟိုကားတစ်ကားကြည့်ထားတာစက်ထဲက မထုတ်ရသေးတာ သူ ဖွင့်မကြည့်မိပေလို့ပဲ ။
ကျမလည်း ထွန်းထွန်းကို“ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ၊ မဂ္ဂဇင်း ဖတ်လို့ မကောင်းလို့ လား ” လို့ဒဲ့ပဲမေးချလိုက်ပါတယ် ။ သူကလည်း “ဒီလိုစာအုပ်တွေ အဆောင်မှာနေတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ အများကြီးပဲ ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်လေ။“မိန်းကလေးနဲ့ ရော အဲဒီစာအုပ်ထဲကလိုတွေလုပ်ဖူးလား ” လို့ ကျမက မေးတော့ “ဟင့်အင်း မမ ”တဲ့ ။ ကျမလည်း သူ့ ကို စ ချင်တာနဲ့အဲဒီပုံထဲကလို ကောင်မလေးတစ်ယောက် အခု မမရဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာတွေ့ ရင် ထွန်းထွန်းဘာလုပ်မလဲ လို့ မေးလိုက်တော့မျက်နှာတွေရဲတက်လာလိုက်တာ ။ နောက်ဆုံးကျမလည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့“ အပြင်မှာ အဲဒီထဲကလို ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မမြင်ဖူးချင်ဘူးလား ”လို့ မေးလဲမေး ၊ တပြိုင်တည်း ကျမရဲ့ည၀တ်အကျီ င်္ကို သူ့ ရှေ့ မှာ ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ထွန်းထွန်းလည်း မင်သက်မိနေပြီး ကျမရဲ့ ထောင်စပြုနေတဲ့နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ် ။
ထွန်းထွန်း တံတွေမျိုချလိုက်သံကို အတိုင်းသားကြားလိုက်ရပါတယ်ရှင် ။ ကျမလည်း ကြည့်လို့ ကောင်းရဲ့ လား..မမ လှလားဟင် ဆိုပီး မေးလိုက်မိတယ် ။ ထွန်းထွန်းက ခေါင်းကြီးကိုအတင်းငုံ့ ထားပီး ခုထိ ရှက်နေသလိုပါပဲ ။ သူ ပြန်မဖြေခင်မှာပဲ ကျမ ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မြွှာ ကို သူ့ ရှေ့ မှာပိုမြင်သာအောင် ခါးလေးရှေ့နဲနဲ ပိုညွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ကျမရဲ့ စိတ်တွေ ထကြွလို့ နေပါပြီ ။ အတွေးထဲမှာတော့ ထွန်းထွန်းဝတ်ထားတဲ့ သူ့ ရဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဘယ်လိုချွတ်ရမလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားနေမိပါတယ် ။ တစ်ခါမှ မိန်းမ မလိုးဖူးသေးတဲ့ လူပျိုရိုင်းလေး ရင်တွေအတိုင်းသား ခုန်နေတာကိုတွေ့ လိုက်ရတော့ ကျမရဲ့ရမ္မက်စိတ်တွေ ပိုပိုပီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမ သူ့ ရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပီး ကျမရဲ့နူးညံ့လှတဲ့နို့ တစ်ဖက်အပေါ်ကို တင်ပေးရင်း သူ့ လက်ကိုကျမရဲ့ လက်နဲ့ ဖိပေးလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ လက်တွေဟာ ကျမရဲ့ နို့ ကိုထိမိတယ်ဆိုရင်ပဲ ဓာတ်လိုက်သလိုတွန့် ကနဲဖြစ်သွားပီး ချက်ချင်းပြန်ရုပ်သွားပါတယ်ရှင် ။
ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် ၊ မကိုင်ရဲလို့ လား လို့ မေးလိုက်တော့“အကြီးကြီးတွေပဲနော် မမ ” တဲ့ ။“ သေချာကိုင်ကြည့်စမ်းပါကွာ…ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးရလဲပြော ” ဆိုပီး ကျမ တဏှာသံလေးစွက်ပီးသူ့ ကိုပြော လိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမရဲ့နို့ တွေကို ရှေ့ တိုးပေးပြီး “ မမကို နို့ စို့ ပေးပါလားမောင်လေးရာ..နော် ” ဆိုပီး ပြောပြောဆိုဆိုသူ့ ထိုင်နေတဲ့ ကုတင်ဘေး လွတ်နေတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ် ။ ထွန်းထွန်းရဲ့ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ပီး ခေါင်းကို ကျမရဲ့နို့ တွေနားရောက်တဲ့အထိဆွဲယူလိုက် အတင်းစို့ ခိုင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ကျမရဲ့ နို့ တစ်လုံးကို ဖြေးဖြေးနဲ့ ညင်ညင်သာသာ စပီး စို့ ပါတော့တယ်ရှင် ။တပြိုင်တည်းမှာပဲတခြားနို့ တစ်ဖက်ပေါ်ကို သူ့ ရဲ့ လက်တွေ ဆွဲယူတင်ပေးလိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်ဖို့ ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ထွန်းထွန်း နို့ စို့ တတ်လာပါပြီရှင်..ကျမရဲ့ နို့ သီးခေါင်း လေးတွေကိုတစ်ဖက်ပီးတစ်ဖက်ပြောင်းပြီး စို့ ပေးနေပါတော့တယ် ။
အရမ်းခံလို့ ကောင်းတာပါပဲရှင် စို့ …စို့ ..မောင်လေး..ဟုတ်ပီ..အဲဒီလို စို့ ပေး…အရမ်းခံလို့ ကောင်းတယ်မောင်လေးရာ…အင်းဟင်းဟင်း ကျမ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ လူပျိုရိုင်းလေး လိုးတာ ခံရတော့မှာ မို့ လို့ ရင်တွေ အခုန်မြန်လိုက်တာ ။ သူနို့ တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်စို့ ပေးနေတဲ့အခိုက် ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေးကလည်း အရေလေးတွေစိမ့်ကျနေပါပြီ ။ ထွန်းထွန်းကတော့ ကျမရဲ့ နို့ တွေကို ကစားလိုက် ညှစ်လိုက်စုပ်လိုက်နဲ့မအားရအောင်ပါပဲ ။ ကျမ ကတော့ ထွန်းထွန်း ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ကြောက်စိတ် တစိုးတစိ မှဖြစ်မလာပဲ အရမ်းကို ကောင်းနေတော့တာပဲရှင် ။ “ထွန်းထွန်း.မမ မောင်လေးလိုးတာခံချင်တယ်မောင်လေးရယ်…လာ..မမ ကိုလိုးပေး…မမပြမယ်ဘယ်လိုလိုးရ သလဲဆိုတာ. ”“မမ ရယ်…မမ အရမ်းလှတာပဲ…အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာမမရယ် ”“ မောင်လေးရယ်..မမ နို့ တွေကို ကလိတာ အားမရသေးဘူးလား လို့ …လိုးရအောင်လေ..နော်။
မမကိုအားမနာနဲ့ ..လိုး နေတုန်း မင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ပက်ပက်စက်စက်စကားလုံးတွေပြောချင်သလိုပြောနော်..အဲဒီလိုပက်ပက်စက်စက်တွေပြောမှ လိုးတာ ပိုအရသာရှိတာမောင်လေးရဲ့ ”။“ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မထင်မိခဲ့ဘူး..အသက်ကြီးတဲ့ မမ အရွယ်က ဒီလောက် ရွ ထ ပီးအရမ်းခံချင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ”အခု ကျမ ထွန်းထွန်းရဲ့ဘောင်းဘီထဲက ရုန်းနေတဲ့ လီးကြီး ကို အနီးကပ်ခံစားလို့ ရနေပါပြီ ။ “ မောင်လေးရယ်..မင်းရဲ့ ဘောင်းဘီထဲက အချောင်းကြီးက မမ အဖုတ်လေးကို လိုးချင်တယ်လို့ ပြောနေသလိုပါပဲ..ဖောင်းပီးရုန်းနေပါလားဟင်”“လာ မောင်လေး..မမ မင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်ပေးမယ်..မင်းလည်း လိုးချင်နေတာမဟုတ်လား ” ကျမပြောရင်းနဲ့ သူ့ ကိုယ် ပေါ်က အ၀တ်တွေကိုတစ်ခုချင်း အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ ချွတ်ပေးနေပါပြီ ။ နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတာကတော့ သန်မာလိုက်တဲ့ ၇ လက်မ အရွယ် လီးတန်ကြီးပဲပေါ့ ။
နောက် ကျမ သူ့ ကိုယ်ကို ရှေ့ ကို ဆွဲလိုက်ပီး သူ့ ရဲ့ ရင်ဘတ်တွေကို လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ဖွဖွလေးပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ နို့ သီး ခေါင်းလေးတွေကိုသွားနဲ့ မနာအောင် ကိုက်ပီး စို့ ယူပေးရင်းတဖြေးဖြေးနဲ့ သူ့ ရဲ့ အောက်ဖက်ဆီကို လျှာဖျားလေးနဲ တို့ လိုက် နမ်းလိုက် စုပ်လိုက်နဲ့ ဆက်ဆင်းလာလိုက်တယ် ။ သူ့ ရဲ့ လီးတန်ကြီးနားမရောက်တရောက်လောက်မှ ကျမအပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပီး သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာနဲ့ စုပ်နမ်းလိုက်တော့တယ်။ ပထမဆုံးတစ်ချီ မှာ ကျမသူ့ အပေါ်ကနေ တက်ပြီးလိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရှင် ။“ မောင်လေးကိုဒီလိုပုံနဲ့ မမလိုးပေးတာ ကြိုက်မှာပါကွယ် ” ကျမ သူ့ ကိုပြုံးပြရင်း ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ ကိုပက်လက်လှဲခိုင်းထားပြီး ကျမကသူ့ ဗိုက်ပေါ်ကို ပေါင်၂ချောင်းကားယားခွလိုက်ပြီးအရင်တက်ထိုင်လိုက်တယ် ။ သူ့ ကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ လေ ။ အဲဒီနောက် သူ့ လီးကြီးကိုထိန်းကိုင်ရင်း ကျမ ရဲ့ ရွစိထနေတဲ့ စောက်ပတ်အ၀လေးမှာ တေ့လိုက်ပါတော့တယ် ။
ပြီးမှ တဖြေးဖြေးချင်းသူ့ လီးမာမာကြီးပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ သူ့ လီးကြီးကျမ စောက်ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ အတွေ့ အထိကို ရလိုက်တော့မှ ပထမဆုံး တဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်လိုက် ၊ပြန်ထိုင်ချလိုက် လုပ်ပေးမိပါတယ် ။ နောက်တော့တဖြေးဖြေး အရှိန်မြှင့်တင်လိုက်မိတယ် ။ ကျမလည်းစောက်ခေါင်းထဲမှာ အရသာတွေ့ လာတာနဲ့ အမျှ မြန်မြန် ဆောင့်ဆောင့်ပေးမိပါတော့တယ်ရှင် ။ကျမ သူ့ ကို မ ယူလိုက်ပီး နမ်းလိုက်ပါသေးတယ် ။ သူကလည်း နမ်းတာကို မလွှတ်ပဲ ကျမရဲ့ ခါးတွေကို လက်တွေနဲ့ သိုင်းဖက်ထား သေးတယ်ရှင့် ။“အိုး…မမရယ်…မမ စောက်ပတ်လေးက အရမ်းကြပ်နေတာပဲနော်…လိုးရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ ”ထွန်းထွန်းက ညည်းသံလေးနဲ့ ပြောလာပါတယ် ။ ထွန်းထွန်းကတော့ ဒီလိုမျိုး ကျမကိုလိုးရမယ်လို့ ဘယ်ထင်ထားပါ့မလဲနော် ။ ကျမကတော့ ကျမ စိတ်ကူးယဉ် ပီးရူးခဲ့ရတဲ့ လူပျို နုနုလေးကို လိုးနေရပီလေ။
ကျမ လည်း ဒီလို ၁၉ နှစ်သားလေးကို ကျမအသက် ၂၉ နှစ်မှာ လိုးပေးရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ထင်ထားခဲ့မလဲ။ အခုတော့ သူ့ လီးအကြီးကြီးက ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လိုးနေပီလေ ။ ပျော်ဖို့ ကောင်းသလားတော့မပြောပါနဲ့ တော့ရှင် ။ စက္ကန့် တိုင်း စက္ကန့် တိုင်းကိုကောင်းနေတာ ။ကျမ သူ့ ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်လေ ။ ကျမ သူ့ လီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိ သွင်းထားပီး ဖင်ကြီးတွေကိုရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ် လျောတိုက်ပေးလိုက်တော့“အိုး….မမ…မမ…အားဟာ့ဟာ..ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် ” ဆိုတဲ့အသံလေး ပေါ်လာပါရော ။ ကျမလည်းလီးငတ်နေတဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုသူ့ လီးကြီး ၀င်နိုင်သမျှ ၀င်အောင် နှဲ့ ထည့်နေလိုက်ပါတယ်ရှင် ။ “ မမ .. ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးပေးပါလားဟင် ” သူ့ ပါးစပ်က ထွက်လာပါပြီ ။ “ ကြိုက်ရဲ့ လားဟင် မောင်လေး .. မင်းရဲ့ လီးကြီးကို မမ ဒီလိုလိုးပေးတာ ကြိုက်လား။
အိုး .. အမေ့ .. ထွန်းထွန်းရယ် .. မမ ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးတာခံချင်လာပီကွာ … မင်းလေး လိုးရတာ ကောင်းတယ်မို့ လား ၊ အောက်ကနေ မမစောက်ဖုတ်ကို ပင့်ဆောင့်ပေးကွာ .. နော် .. နော် …” ကျမ ထွန်းထွန်းလီးကြီးပေါ်ကို အားပါးတရ တက်လိုးပေးနေရင်း ပါးစပ်ကလည်း ညည်းနေမိပါတယ် ။ ကျမ နောက်တစ်ချီ ထပ်ပီးချင်လာပါတော့တယ်ရှင် ။ စောက်ခေါင်းထဲက ရွစိ ရွစိ ဖြစ်လာပြီး ဘယ်လိုမှ အောင့်ထား ထိန်းထားလို့ မရတော့အောင် ကောင်းလွန်းလို့ ကျင်တက်လာပါတော့တယ် ။ “ အိုး … အား .. အာ့ …. ရှိစ်း …. မောင်လေး .. မောင်လေး …. ဟင့် … အား …. အာ့ … မမ … မမ … ပီး … ပီး … အား … ပီးနေပီး… အီးဟီးဟီး ……” ကျမ နောက်ဆုံး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်ဟစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ချီ ပြီးသွားပါတယ်ရှင် ။ ထွန်းထွန်း ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျမ အရမ်းကောင်းလာပြီး ပီးသွားတာကို အားရကျေနပ်နေပုံပဲ ။
သူလည်း အတွေ့ အကြုံရသွားတာပေါ့လေ .. လိုးနေတုန်း မှာ မိန်းမ က ပီးသွားတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ အတွေ့ အကြုံပေါ့ ။ ကျမ ကတော့ သူ ဘာကိုကျေနပ်နေသလဲဆိုတာ အတိအကျမသိပါဘူး ။ ကျမ သူ့ လီးကြီးကိုစုပ်ပေးတာလား ၊ ကျမစောက်ဖုတ်ကိုသူယက်ပေးနေတုန်း ကျမ ပီးသွားတာကိုလား ၊ ကျမ သူ့ ကို တက်လိုးပေးနေတုန်း ကျမ ပီးသွားလို့ သူသဘောကျနေတာလား မဝေခွဲတတ်တော့တာအမှန်ပါ ။ ခုန က ကျမ ဆုံးခန်းတိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ ရဲ့ ခါးကို ကျမပေါင်တွေနဲ့ တင်းနေအောင်ညှပ်ပစ်လိုက်မိတာ ခုမှပဲသတိထားမိတော့တယ် ။ “ ကဲ … အခု မောင်လေး အလှည့်နော် ” ကျမပြောရင်း သူ့ ကို ကျမစောက်ဖုတ်လေး ပြလိုက်ပါတယ်ရှင် ။ “ ကျနော် ဘယ်နေရာ ကို ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မှ မသိတာ မမရဲ့” “ ကဲ လာ .. မမ အပေါ်ကိုတက်လိုက် … မင်းလီးကြီး ကို မမ စောက်ပတ်ထဲထည့် .. ပီးတော့ မမ ကိုလိုးပေးတော့ပေါ့ မောင်လေးရဲ့ ။
ကျန်တာ မင်းလေးအတွက် မမ လုပ်ပေးမယ် နော် ” သူ ကျမ ပေါင်ကြားထဲကို ဒူးထောက်ဝင်လာပြီး ကျမအကူအညီနဲ့ ပဲ သူ့ လီးကို ကျမစောက်ပတ်လေးထဲ တေ့ပီး ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမလည်း သူ့ လိုးတဲ့အတိုင်း စည်းချက်ကျကျ တင်ပါးတွေကို ကော့ကော့ပေးရင်းလီးတန်ကြီးစောက်ဖုတ်ထဲ ၀င်နိုင်သမျှဝင်အောင် လို့သူ့ ဖင်ကြီးတွေကိုလက်၂ဖက်နဲ့ ဆွဲဆွဲချပေးမိတော့တာပေါ့ ကျမ သူ လိုးနေတုန်း သူ့ မျက်နှာတွေအနှံ့ လျှာနဲ့ လျှောက်ယက်ပြီး သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်းစုပ်သေးတယ်လေ ။ “ လိုး … လိုး .. မောင်လေး … မောင်လေး လိုးနိုင်ပါတယ်ကွာ … မမ ကို မောင်လေး ဒီလို အမြဲတမ်းလိုးပေးရမယ်နော် .. နော် .. လို့ ” “ မမ နဲ့ ကျွန်တော် ဒီလို လိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အရင်က ထင်ထားဖူးလားမမ ” လိုးနေရင်း အဆောင့်မပျက်ပဲ ကျမကိုမေးတာလေ ။ “ အင်း … အင်း …” ကျမလည်း ဒီလောက်ပဲပြန်ဖြေနိုင်တော့တယ် ။
ဆောင့်ကွာ .. မောင် … မြန်မြန်နဲ့ ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပေးစမ်းပါကွာ ထွန်းထွန်းရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက တဖြေးဖြေးနဲ့ကြမ်းပြီး မြန်လာပါတယ် ။ “ ကောင်းလားမမ ဒီလိုဆောင့်ပေးတာ .. ကြိုက်လား ” “ အင်း … အင့်ဟင့် … ကောင်းတယ်မောင်ရယ် .. မမ အရမ်းကြိုက်တယ် .. ဆောင့်ပါ .. မရပ်နဲ့ကွာ .. ဆောင့် .. ဟုတ်ပီ . . မောင် … အိုး … အိုး .. မောင်ရေ .. မြန်မြန် … မြန်မြန်လို့ဆို့.. အိဟင့်ဟင့် ….” ကျမပြောတဲ့အတိုင်း ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တာ အရမ်းကို ထိတော့တာပါပဲရှင် ။ ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် မှာတော့ သူ့ ရဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ ကျမရဲ့သားအိမ်ဝကို ဒုတ်ခနဲ လာတိုးမိပြီး သူ့ ဂွေးအုတွေက ကျမ ရဲ့ ဖင်ဝလေးကိုလာရိုက်မိလိုက်တဲ့အဆောင့်မှာ ကျမ ပီးချင်သွားပါတော့တယ် ..။ “ အိုး ……. အိုး …….. ထွန်းထွန်း … အားဟားဟာ့ .. မောင် .. မောင်ရယ် … လိုး .. လိုး .. ဟင့်ဟင့် … မမ ပီးတော့မယ်ကလေးရယ် .. မမကို ဒီအတိုင်းနာနာလေး မရပ်တမ်းလိုးပေးပါ။
အားရှိစ်း … အင်းဟင့် … ဟင့် …. လိုး … လိုး … အား …. အာ့ .. သေပီ .. သေပီ … အားအားရှိစ်း …. အွန့်…” ထွန်းထွန်းကလည်း လိုးနေတဲ့ အရှိန်ကို ပိုပြီး တင်လိုက်ရင်း ကျမ ရဲ့ လီးဆာနေတဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တဖွတ်ဖွတ် တဖတ်ဖတ် မရပ်မနားဆောင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမလည်း ထွန်းထွန်းရဲ့ခါးကို ကျမရဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ညှပ်ကာဆွဲချရင်း “ အင့် … အင့် … လိုး … ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးပါမောင် .. မမစောက်ပတ်ကြီး ကွဲထွက်သွားအောင်သာလိုးပစ်လိုက်ပါတော့ … ” ကျမ ပီးချင်တာ လမ်းတစ်ဝက်ရောက်နေပြီလေ။စောက်ခေါင်းထဲက မခံမရပ်နိုင်အောင် ကျင်တက်လာလိုက်တာ ။ ထွန်းထွန်းကလည်း မညှာမတာ ကျမ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုသူ့လီးကြီးနဲ့ ပစ်ပစ်ပြီး မနားတမ်းဆောင့်လိုးပေးရင်း က ကျမ လည်း တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်တက်လာပြီး “ အိ .. ဟိ … ဟိ … မောင့် …. အိ … ဟိ …. မမ .. ပီး … ပီ … အာ့ … ပီးပီ … အာ့ ” စကားတောင် ပီသအောင်မပြောနိုင်တော့ပါဘူးရှင် ။
ထွန်းထွန်းလည်း ကျမ အရမ်းကောင်းနေပုံကိုကြည့်ပီးလိုးနေရင်းက “ မမ … မမ .. ကျွန် .. ကျွန် .. တော် .. လည်း … ထွက် .. အာ့ … ထွက်တော့မယ် … အင်းဟင့် ….” “ ပန်းထည့်လိုက်လေမောင် .. မောင့်အရေတွေ မမစောက်ခေါင်းထဲပန်းထည့်လိုက်။ မိန်းမ စောက်ဖုတ်ထဲကို အရေပန်းထည့်ရတဲ့အရသာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိအောင် .. ပန်းထည့် … ပန်း .. အင့်ဟင့် … အား ……. အား … အ …. ထွက်ပီ မမ ရေ … အားဟားဟား … ထွက်ကုန်ပီမမရဲ့.. အားအားအာ့ ….” ဆိုပီး ကျမ ရဲ့ စောက်ခေါင်း ထဲကို သူ့ လီးထဲကအရေတွေ ဂွေးအုထဲမှာ မကျန်တော့တဲ့အထိ နွေးကနဲ နွေးကနဲ ပန်းသွင်းလိုက်ပြီး ကျမ ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမလည်း သူ့ ကိုဖက်ထားရင်း လီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲကပြန်မထုတ်ပဲ နှစ်ယောက်သားဖက်လျက် တစ်ရေးအိပ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ် ။ ခနနားပြီး ပြန်နိုးလာကြတဲ့အခါ ထွန်းထွန်းက “ မိန်းမလိုးတယ်ဆိုတာ ဒီလောက်ကိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးမမရယ် ” တဲ့ ။
ကျွန်တော်လိုးပေးတာ ခံလို့ကောင်းရဲ့ လားဟင် အဆင်ကောပြေရဲ့ လား မမ “ မင်းလေး က ထိပ်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုပေမယ့် လိုးတတ်သားပဲ ” ကျမ ပြုံးပြုံးလေး သူ့ ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ကျမ ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြီးသွားအောင်လိုးပေးနိုင်တယ်လေ ။ ဟုတ်တယ်နော် ။“ မင်းလေး က နဲနဲလေးသင်ပေးရင် များများတတ်လွယ်လိုက်တာ ၊ ဒါပေမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် လိုးရမလဲဆိုတာ ထပ်လေ့လာဖို့ ပဲလိုတော့တယ် ” လို့ကျမ က သူ့ အမေးကို ပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့ ။ သူက ကျမအပေါ်ကို လီးကြီး တပ်လျက်တန်းလန်းကနေ ကျမ အဖုတ်လေးထဲက လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ကျမဘေးဖက်ကို လှဲချလိုက်ပါတယ်။ လက်က အငြိမ်မနေ ပဲ ကျမရဲ့နို့ သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကို ထပ်မံ ကလိပေးနေသေးတယ်ရှင် ။ ကျမ ကလည်း သူ့ ကို ကျမ တို့ ၂ယောက်စလုံးပင်ပန်းနေပြီ ဖြစ်လို့ရေချိုးပြီး ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်နားရအောင်လို့ လောဆော်ရပါတော့တယ် ။
ကျမလည်း ရေချိုးပြီး မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ကာ လုပ်စရာရှိ တာလေးတွေဆက်လက်လုပ်နေလိုက်ပါတယ် ။ သူ့ ကို ဘာစားချင်လဲမေးတာ ပြန်မဖြေလို့ကျမ အလိုက်တသိနဲ့ပန်းသီးဖျော်ရည် ၂ယောက်စာ ဖျော်ပြီး သူရှိတဲ့အိပ်ခန်းဆီကိုယူသွားရင်း ကုတင်ပေါ်ကိုတင်ပါးလွှဲထိုင်လိုက်ရင်းက “ ထွန်းထွန်း … မင်းလေး ဖင်ပေါက်ကိုလိုးတာရော ကြုံဖူးသလားဟင် ” “ မမ ကလဲ .. ကျွန်တော်မှ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ မလိုးဖူးတဲ့ဟာ .. မမ က ကျွန်တော့်ပထမဆုံးလိုးဖူးသူလေ ။ ဖင်ပေါက်လိုးတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြုံဖူးမှာလဲ မမရဲ့” ဆိုပြီး ချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ် ။ သူကလည်းမေးသေးတယ်ရှင့် “ မမရော မမရဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ဘဲက လိုးပေးတာ ခံဖူးတာလားဟင် ” “ အိုး … ခံဖူးတာပေါ့ မောင်လေးရယ် ” “ ဘယ်လိုနေလဲဟင်မမ ၊ ဖင်လိုးခံရတဲ့ အရသာက ။ ကျွန်တော်သိချင်တာက မမဖင်ပေါက်လေးထဲကို လီးကြီးထည့်လိုက်တော့ မနာဘူးလား ” “ နာတော့နာတာပေါ့ မောင်လေးရဲ့။
ဒါပေမယ့် ဖင်ပေါက်ကိုရော လီးကိုပါ ချောသွားအောင် အဆီတစ်ခုခု နဲ့ လိမ်းပြီးမှ လိုးတာပေါ့ စစချင်းတစ်ခါ နာပြီး နောက်ပိုင်းကောင်းလာတာပဲလေ ” လို့ ကျမကလည်းပြောလိုက်ရော “ ကျွန်တော်ကတော့ မမရဲ့ ဖင်ပေါက်ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူး ။ မမစောက်ပတ်ကတော့ ကျွန်တော့်လီးကိုညှစ်ထားလိုက်တာ ကြပ်ထုပ်နေတာပဲ ” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်ရှင် ။ ကျမလည်း သူနဲ့ ဆက်စ် အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ပါတော့တယ် ။ ကျမ သူ့ ကို ဖင်လိုးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတုန်းမှာ သူ့ မျက်လုံး တွေက အရောင်တလက်လက်နဲ့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ပုံပါပဲ ။ သူ့ ကိုကြည့်ရတာ ကျမရဲ့ ဖင်ကို လိုးကြည့်ချင်နေပုံရတယ်ရှင့် ။ “ မင်းလေး ဖင်လိုးတဲ့ ဖီလင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိချင်ရင် မမဖင်ကို မင်းလိုးကြည့်ပါလားဟင် ၊ အချိန်မရွေးလိုးကြည့်လို့ ရပါတယ် မောင်လေးရဲ့ ” ကျမက အချိန်မရွေးဆိုတာ သူ့ ကို လိုးထားရတာမောလို့ မလိုးနိုင်လောက်သေးဘူးထင်ပြီး သက်သက် စ လိုက်တာပါ ။
ဒါပေမယ့် ကျမအထင် မှားသွားပါလေရောရှင် ။ “ မမ .. ဒါဆို အခု ကျွန်တော်တို့လိုးကြည့်ရအောင်လေ ” ထွန်းထွန်း လီးကြီးကတော့ ခုန လိုးထားရလို့ အကုန်နီးနီးတော့ မထောင်နိုင်သေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပျော့နေတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူးရှင့် ။ ကျမလည်း ထွန်းထွန်းကို“ဖင်ထဲကိုလိုးချင်ရင် လီးက မာတောင်နေမှရတာမောင်လေးရဲ့ ” သူ့ ရဲ့ လီးကြီး ပထမဆုံးအကြိမ်မှာတောင်ကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဒီလောက်ထိကောင်းအောင်လိုးပေးနိုင်တာ ဖင်ကိုလိုးရင်လည်းစောက်ဖုတ်လိုးတာထက်မသာရင်သာနေမယ် ။ အရသာတော့လျော့မယ်မထင်ဘူးလို့ တွက်လိုက်မိပါတယ် ။ ကျမလည်း ကျမ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေချွတ်ချလိုက်ပြီး ထွန်းထွန်းရဲ့ အောက်ပိုင်းဆီကိုသွားကာသူ့ ရဲ့ လီးကို ကျမပါးစပ်ထဲနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ထည့်မိပါတော့တယ် ။ လည်ချောင်းထဲရောက်တဲ့အထိ သူ့ လီးကြီးကိုစုပ်စုပ်ပေးလိုက်တော့ လီးကြီးဟာ တစထက် တစ ကြီးကြီးလာရင်း ကျမပါးစပ်လေးထဲမှာအပြည့်ပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင် ။
“မမ ရယ်…မမ လီးစုပ် အရမ်းတော်ပါလားဗျာ ” ထွန်းထွန်းက ညည်းပြောလေးပြောရင်း “ မမ..မမကတော့ တော်တော်ထန်တာပဲနော်”လို့ ဆက်ပြောပါလေရော ။ ထွန်းထွန်းရဲ့ လီးကြီး အပြည့်အ၀မာတင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ကျမပါးစပ်ထဲကနေသူ့ လီးတန်ကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်းမှန်တင်ခုံပေါ်ကချောဆီဗူးလေးကိုလှမ်းယူပြီး ကျမလက်ထဲကိုချောဆီ လောင်းထည့်လိုက်ကာထွန်းထွန်းရဲ့ လီးကြီးကို လိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ။ ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျမက တစ်ဖက်လှည့် ဖင်လေးကုန်းပေးရင်း ထွန်းထွန်းကို ကျမဖင်ထဲချောဆီဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာ ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။“မမ ဖင်ခေါင်းကို အဲဒီအဆီနဲ့ ရွှဲနေအောင်ထည့်ပေးနော် မောင်လေး ၊ ပီးရင် မမတို့ လိုးလို့ ရပြီ ”ကျမ ဖင်ခေါင်းလေးထဲကို ဆီလိုသလောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ထွန်းထွန်းရဲ့ လီးကြီး ကျမဖင်ထဲကိုထည့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပေါ့ရှင်။ကျမ ဟာ ထွန်းထွန်းရဲ့ တောင်နေတဲ့လီးကြီးကိုကိုင်ပီး ဖင်ဝမှာတေ့လို့ဖင်လိုးဖို့ လမ်းကြောင်းကြောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူဟာ သူ့ လီးကြီးကိုချက်ချင်း ကျမ ဖင်ပေါက်လေးထဲကို လိုးထည့်လိုက်ချင်နေပုံရပါတယ် ။ ကျမက သူ့ လီးကို ဖြေးဖြေးချင်းမနာအောင်ထည့်ရကြောင်းသင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကျမရဲ့ ဖင်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို ထွန်းထွန်းရဲ့ လီးဒစ်ကြီး ဖြေးဖြေးချင်း စတင်ဝင်လာပါပြီရှင်။“အိုး…မမ…”သူဟာ ကျမရဲ့ နောက်ပေါက်ထဲကို လီးကြီးဝင်နေတာကြည့်ရင်းအားမလိုအားမရအော်သံထွက်လာပါတယ် ။“မမ ဖင်ပေါက်က အရမ်းကြပ်တာပဲ ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကောင်းတယ်မမရာ ”“ ကောင်းရင်လိုးလေ မောင်လေးရဲ့” လို့ ကျမက ပြောရုံပဲရှိသေးတယ် သူ့ လီးကြီးက ကျမဖင်လေးထဲကိုအဆုံးနီးနီးထိရောက်နေပါပြီ ။“လိုး..မောင်လေး…ထပ်ထည့်လေ…အဆုံးရောက်အောင်လိုးပေးကွာ ”“ထပ်ထည့်ရမှာလားဟင် မမ ” ပြောပြောဆိုဆို သူ့ လီးကြီးကို ကျမဖင်လေးထဲ ဖိသွင်းလာပါတော့တယ် ။ ဟုတ်ပီမောင်…မမဖင်ထဲကို မောင့်လီးကြီးအဆုံးထိသွင်းလိုက်ပါ။
မမဖင်ကြီးကိုလိုးလိုက်စမ်းပါမောင်ရယ်…အာ့ဟာ့ဟာ့…ထွန်းထွန်းလိုးပါကွာ…မမ ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ခံလို့ ကောင်းလို့ ပါ..လိုးစမ်းပါမောင်ရယ် ”ထွန်းထွန်းရဲ့ရမ္မက်ဇောနဲ့ မောသံကို ကျမ အတိုင်းသားကြားနေရပြီး ကျမလည်း အော်သံတွေကျယ်သထက်ကျယ်အောင်အော်မိပါတော့တယ် ။ “အား…အားလား..အဟင့်ဟင့်…လိုး…လိုး..ဟုတ်ပီမောင်..အဲဒီလိုလိုးပေး ”ထွန်းထွန်းဟာ ကျမစအိုပေါက်လေးထဲကို အရှိန်နဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ပီးလိုးပေးပါတော့တယ် ။ သူ့ ရဲ့လီးက ကြီးတော့ ကျမဖင်လေးထဲကို လီးကြီးထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း “ ဗွတ်….ဗွတ်….“ဆိုတဲ့ဖင်ခေါင်းလေးထဲက လေတွေ အပြင်ကိုအန်ထွက်တဲ့အသံကလည်းတမျိုးအသည်းယားဖို့ ကောင်းလှသလို….သူ့ လီးကြီး ကျမ စအိုထဲကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လိုးပေးနေတဲ့အရသာဟာ ပြောမပြတတ်အောင်ကိုကောင်းတာပါပဲရှင် ။“ ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်..ကျွန်တော် တစ်ခါမှ ဒီလို ဖင်ပေါက်ကို လိုးဖူးလိမ့်မယ်လို့ မတွေးမိခဲ့ဖူးဘူး ”“အိုး….မောင်လေးရယ်..မမ ကို မညှာနဲ့ …မမဖင်လေးကို မောင့်လီးကြီးနဲ့ မောင့်စိတ်ကြိုက်သာလိုးလိုက်ပါတော့…အာ့အာ့ ကောင်းလှချည်လား မောင်လေးရယ်…ဟင့်ဟင့်”ကျမရဲ့စအိုထဲကို ထွန်းထွန်းရဲ့မာကျောလှတဲ့လီးကြီးဝင်လာတာ အစပိုင်းက နာသလိုလို အောင့်သလိုလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဖင်ခေါင်းလေးထဲမှာ အီစိမ့်ရင်းကောင်းလာပါတော့တယ်ရှင် …. ပြီးပါပြီ။
အဖေ အိုနပွေီလား ? ဘယျသူမှအဖလေကျကိုဆှဲပွီးဖေးမကူညီဖို့သတိမရကွဘူ